အမဲလိုက်ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုတာဘာလဲ | ခရီးသွားသတင်း
အဲဒါဘာလဲသိလား အမဲလိုက်ခရီးသွားလုပ်ငန်း? ၎င်းသည်နာမည်မှကောက်ယူရန်ခက်ခဲသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်တိရိစ္ဆာန်များနှင့်အမျိုးသားများအကြောင်းပြောပါက ... သင်စိတ်ကူးရပြီလား။
အမဲလိုက်ခရီးသွားလုပ်ငန်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုအမဲလိုက်နေသည်။ ၎င်းသည်ယနေ့လူကြိုက်အများဆုံးသို့မဟုတ်အကောင်းဆုံးစာနယ်ဇင်းများတွင်ရှိကောင်းရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ အမှန်မှာသေခြင်းသည်မပျော်ပါ၊ သို့သော်အဖြစ်မှန်မှာ၎င်းတည်ရှိပြီး ကမ္ဘာပေါ်မှာနေရာအနှံ့အပြားကအဲဒါကိုကမ်းလှမ်းပြီးနေထိုင်ကြပါတယ်။
ဤသည်မှာခရီးသွားလုပ်ငန်း၏အမည်ဖြစ်ပြီးအမဲလိုက်ခြင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ ထောင်နှင့်ချီသောလူများ၊ များစွာသောသူတို့ကကမ္ဘာအနှံ့တွင်ချမ်းသာကြွယ်ဝစေသည်။ ၎င်းသည်တရား ၀ င်ပြီး၎င်းကိုကျင့်သုံးသူများသည်စည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာရမည် ထိုသို့စဉ်းစားကြောင်းစံချိန်စံညွှန်း။
ဟုတ်ပါတယ်, ဥပဒေချိုးဖောက်နှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မျိုးစိတ်ပိုင်တိရိစ္ဆာန်များကိုသတ်သောသူသို့မဟုတ်ရာသီကတည်းကလုပ်သူတွေကိုအမြဲရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဒါကရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုတရားဝင်ကျင့်သုံးသောအခါ ၎င်းသည်ထိုဒေသများရှိမျိုးစိတ်များကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ရပ်ရွာများရှင်သန်ရပ်တည်ရေးကိုအထောက်အကူပြုသည်။
အမဲလိုက်ခရီးသွားလုပ်ငန်း ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးက ဒါနဲ့အမေရိကန်ကတောင်အမေရိက၊ စပိန်ကနေဒါခရိုအေးရှားအထိတွေ့တယ်။ သင်ဟာအာဖရိကမှာ Safaris အကြောင်းပိုစိတ်ထဲရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်အားကစားအမဲလိုက်ခြင်းဟာနေရာအနှံ့မှာတွေ့ရလိမ့်မယ်။
တကယ့်အမဲလိုက်ခရီးသွားလုပ်ငန်းအခြေခံအဆောက်အအုံရှိပါသည် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး၊ ပါမစ်များကိုဂရုစိုက်ပြီးအရာအားလုံးသည်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောမူဘောင်အတွင်း၌ရှိနေသည်။ အထူးကျွမ်းကျင်သူများကအမဲလိုက်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေအနေနှင့်ပင်ဖြစ်သည်၊ ၎င်းကိုမကြာမီသမိုင်း၏ရင်ဘတ်ထဲတွင်ထားခဲ့ရန်၎င်းတွင်ကြော့ရှင်းပြီးကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်ဟုဆိုကြသည်။
လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်အမှတ်တရလက်ဆောင်များကို ၀ ယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဒီအားကစားမှာလူတိုင်းမှာပိုက်ဆံမရှိဘူး။ အထူးသဖြင့်မင်းရဲ့ဂိမ်းကဂိမ်းကိုအမဲလိုက်ပြီးအာဖရိကကိုသွားဖို့လိုတယ်။ ဒါပေမယ့်သေးငယ်တဲ့ပမာဏဒါမှမဟုတ်အသေးစားအဆင့်မှာဆိုရင်၊ အားကစားတစ်ခုဖြစ်ပြီးပြည်နယ်များ၊ ကျေးလက်ဒေသများနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိသီးခြားနိုင်ငံများတွင်လည်းလေ့ကျင့်နိုင်သည်။
ဒီမှာ အရေးကြီးသောအရာမှာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတော်တည်ရှိမှုဖြစ်သည် ဘာလို့လဲဆိုတော့သူသာသူမဖြန်ဖြေပေးဘူးဆိုရင်အရင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာကတော့မျိုးစိတ်စုစုပေါင်းပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတာပါပဲ။ အားကစားအမဲလိုက်ခြင်းဖြင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်ဆန့်ကျင်ဘက်ပင်ဖြစ်သည် မကြာခဏအချို့သောမျိုးစိတ်များ၏လူ ဦး ရေကိုထိန်းချုပ်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည် အရေအတွက်တစ်ခုထက်ကျော်လွန်လျှင်အခြားသူများကိုတိုက်ခိုက်လိမ့်မည်။
ပြည်နယ်၏ရှေ့မှောက်တွင်သင်တန်းကနေဖြစ်ပါတယ် ခွင့်ပြုချက်, အ အမဲလိုက်ရာသီပြုပြင်တာတွေဒီအမဲလိုက်ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုကိုကမ်းလှမ်းသောကုမ္ပဏီများ၏ခွင့်ပြုချက်နှင့်ထိန်းချုပ်မှု။
အခြေခံအားဖြင့် အမဲလိုက်ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည်ဂိမ်းငယ်၊ ဂိမ်းကြီးနှင့်ရေကစားနည်းများကိုခွဲထားသည်။ ပထမနှစ်ခုမှာဆည်များ၏အရွယ်အစားနှင့်ဒုတိယတစ်ခုမှာ၎င်းကိုအသုံးပြုသည့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ သေးငယ်တဲ့ဂိမ်းယုန်, လိပ်ချိုးသို့မဟုတ် Partridge ပါဝင်သည်ဥပမာသည်။ ဂိမ်းကြီးမှာဝက်၊ သမင်တို့ပါ ၀ င်သည်နှင့်ရေနေအမဲလိုက် webbed နှင့် waterfowl wader.
အခြားတစ်ဖက်တွင်ကျနော်တို့ရှိသည် အထူးသဖြင့်ခရီးသွား for ည့်သည်များအတွက်ငွေအမြောက်အများနှင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်, နေရာထိုင်ခင်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်တောင်းဆို, အထူးပြုအားကစားမုဆိုးများအတွက်တတိယနှင့်တတိယ တစ်ပိုင်း-informal ။
အထူးအားကစားသမားများသည်မျိုးစိတ်များကိုရှာဖွေရန်နေရာများကိုရွေးချယ်ရန်ရွေးချယ်သောအုပ်စုများတွင်မကြာခဏသွားကြသည်။ ပြီးခဲ့သည့်အုပ်စုတွင်ငွေများများပြားလွန်းခြင်းသို့မဟုတ်ဝယ်လိုအားများခြင်းမရှိသည့်အပြင်၎င်းတို့သည် group ည့်သည်အုပ်စုတစ်စုကိုငှားရမ်းခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ခရီးများပင်အကြိမ်ကြိမ်မပြုလုပ်နိုင်ပါ။
အာဖရိကမှာ, ဟုတ်ပါတယ်။ ဒီကြီးမားပြီးကြွယ်ဝတဲ့တိုက်ကြီးဟာစိတ်ထဲ ၀ င်ပြီးခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်ဖြင့်ပထမဆုံးသော ဦး တည်ရာဖြစ်သည်။ တိရိစ္ဆာန်သိုက်များရှိသောအာဖရိကနိုင်ငံများရှိပြီး၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်သည်အမဲလိုက်ခြင်း၊ ဈေးကြီးပြီးသီးသန့်ထားခြင်း၊ စျေးသက်သက်သာသာနှင့်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြစ်ခြင်းစသည့် Safaris များကိုစီစဉ်ကြသည်။ တစ်ခါတစ်ရံသူတို့သည်အမဲလိုက်နေကြပြီးအခြားအချိန်များတွင်မူငှက်ကြည့်ရှုလေ့လာခြင်းသာဖြစ်သည်။
ငါပြောမယ် တန်ဇန်းနီးယား၊ ကင်မရွန်း၊ နမီးဘီးယား။ ငါခြင်္သေ့တွေ၊ ဆင်တွေ၊ ဓာတ်ငွေ့တွေ၊ ကျွဲတွေ၊ မိကျောင်းတွေ၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင်အားကစားလေ့ကျင့်ခြင်းနှင့်တစ်ခါတစ်ရံအထူးလမ်းညွှန်များဖြင့်လေ့ကျင့်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ ခွင့်ပြုချက်ကိုလုပ်ဆောင်ရမည်။ ထို့နောက်အမဲလိုက်နိုင်သောပမာဏသို့မဟုတ်အမဲလိုက်ခြင်းအတွက်သတ်မှတ်ထားသောနေ့ရက်များကိုကပ်ထားပါ။
အာဖရိကမှထွက်ခွာ အာဂျင်တီးနား တောင်အမေရိကရှိ၎င်းသည်ယခုအချိန်တွင်အမဲလိုက်ခရီးသွားနေရာတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ Pampas နှင့်တောင်ပိုင်း Patagonia တို့သည်ဝက်၊ ကျွဲ၊ ခို၊ ခို၊ ဆိတ်၊ မြောက်ဘက်သို့ပိုမို မက္ကစီကို အဆိုပါ Jaguar ၏အမဲလိုက်ခြင်းကမ်းလှမ်းကျနော်တို့ကျွန်တော်သူတို့ဆက်လက်တက်လျှင်, သူတို့သည်ဖြစ်ကြသည် ကနေဒါနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု.
ဝံ၊ wရာမ ၀ တ်၊ ဝံပုလွေများနှင့်အမေရိကန် bison များသည်မြောက်အမေရိကတွင်အနှစ်သက်ဆုံးနှင့် ပို၍ များသည် Alaska ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံနှင့်သေးငယ်တဲ့ဖျံကိုလိုက်ရှာနေကြသည်။ တကယ်တော့ကနေဒါသည်ဆံပင်မလှုပ်ရှားဘဲတံဆိပ်ခတ်နေသောကလေးငယ်များနှင့်လင်းနစ်ပေါင်းသုံးသောင်းကျော်ကိုရှာဖွေရန်ခွင့်ပြုထားသည်။
အာရှပစိဖိတ်ဒေသ၏လှပသောသဘောသဘာဝ နယူးဇီလန်နှင့်သြစတြေးလျ ၎င်းသည်အမဲလိုက်ခရီးသွားရာနေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်လာသည်။ မုဆိုးများသည်ဒေသခံ Cheetahs နှင့်သမင်များကိုရှာဖွေကြသည်။
အမဲလိုက်ခြင်းသည်သမိုင်းများစွာရှိသည် ၎င်း၏ရာသီဥတုနှင့်ပထဝီအနေအထား၏အထူးသဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောဂေဟစနစ်, သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မျိုးစိတ်နှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီဖွဲ့စည်းထားကတည်းက။ အထူးသဖြင့်ကျေးလက်ဒေသများတွင်အားကောင်းသောဖြစ်သည်လူ ဦး ရေနည်းသောဒေသများသည်မြို့ကြီးများသို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
အချို့ဒေသများသို့လှည့်ပါပြီ ရေရှည်တည်တံ့သောခရီးသွားအမဲလိုက် ယခင်ရာစုနှစ်များအတွင်းခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိသောအမဲလိုက်ခြင်းသည် ၄ ​​င်းတို့ကိုပျောက်ကွယ်လုနီးပါးမျိုးစိတ်များပြန်လည်ရှင်သန်လာသဖြင့်ရလဒ်ကောင်းများရရှိခဲ့သည်။ နောက်ထပ်ဘာလဲ ဝင်ငွေအရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်, တိုက်ရိုက်အလုပ်ငါးထောင်ကျော်ကိုထုတ်လုပ်နှင့်ဥပမာ, Castilla-La Mancha အတွက်သာသန်း 240 သန်းယူရို။
အမျိုးမျိုးသောအားကစားအမဲလိုက်ကြသည်: လေးများ, parany နှင့်ခွေးနှင့်ပုဆိန်, ကောင်တာ, silvestrismo, လေး, ပတ်ပတ်လည်, cowing နှင့်လှံနှင့်အတူခုန်ကျော်သွားသည်။ တစ်ခုချင်းစီသည်သားကောင်ကိုဖမ်းယူရန်နှင့်ဖမ်းယူရန်အတွက်ကွဲပြားသောနည်းစနစ်တစ်ခုကိုဖော်ပြသည် (သစ်ပင်များ၊ ပိုက်ကွန်များသို့မဟုတ်တိရိစ္ဆာန်များဖြစ်သည့်ခွေးများ၊ ၀ တ်ကောင်များသို့မဟုတ်ထိုရည်ရွယ်ချက်များအတွက်လေ့ကျင့်ထားသောငှက်များ၊ သေနတ်များ၊ ပျိုးပင်များ) ။
အတိုချုပ်ပြောရလျှင်အမဲလိုက်ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည်လုယူရာဥစ္စာ၊ မုဆိုး၊ ခရီးစဉ်၊ တည်းခိုခန်း၊ ရိုးရှင်းသောတဲ၌ရေချိုးခန်းမရှိဘဲ၊ လှပသောတိုင်းပြည်အိမ်၊ ဟိုတယ်တစ်ခု၊ အိမ်ခန်းတစ်ခုသို့မဟုတ်အာဖရိကကြယ်များအောက်ရှိဇိမ်ခံစခန်းတစ်ခုတွင်အိပ်ပျော်သည်ဖြစ်စေရှေးဟောင်းအမဲလိုက်ခြင်းသည်ဤကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များကိုစည်းလုံးစေသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ခရီးသွား » အကြံပေးချက်များ » အမဲလိုက်ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုတာဘာလဲ
အမဲလိုက်ခြင်းဆိုင်ရာခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုအမြစ်ပြတ်။ ရာဇ ၀ တ်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်သင့်သည်။
Iguazu Falls ဘယ်မှာအကောင်းဆုံးလဲ။ ဘရာဇီးလား၊ အာဂျင်တီးနားလား။
ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးမြေအောက်ရှုခင်း ၁၀ ခု